Nadiifinta Nikkel -ka Gacanta Musqusha | Qasabadaha Qubayska Musqusha
Bogga ugu weyn / Qubeyska Musqusha / Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya / WOWOW Qasabada Suxuunta Musqusha Musqusha Nickel
Qashin-aruurinta tubada ayaa kuu keenaya jadwallo waqti-xumo ah oo dib loogu soo celiyay habab cusub oo loogu talagalay gobollada shaqada ee kala duwan ee musqusha. Ku dukaamayso tuubbooyinka musqulaha derbiyada derbiga ku yaal dhammaadyo badan oo kala duwan.
2321501 tilmaamaha rakibaadda
Qubeyska musqusha hal mar 2321501
Qashin-qubadan musqusha keliya ayaa bixisa casriyeyn casri ah oo musqushaada ah. Waxaa si taxaddar leh loogu qaabeeyey jilicsanaan, haddana iyadoo si qalloocan loo maleegayo. Qalabka kaliya ee musqusha ee WOWOW waxaa loogu talagalay seddex geesood, iyadoo lagu darayo dhameystirka nikeliyada caadiga ah ee la caday. Maaha wax aan waxba ka jirin musqusha qolka qasabadu hal-qabadku yahay indho-indheeye musqusha kasta, waana hubaal inuu noqon doono mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka u ah qurxinta cusub ee musqushaada.
Cilmi baaris ayaa muujisay in qasabadaha musqusha ay yihiin meelaha ugu muhiimsan ee musqusha kasta. Taasi waxay ka dhigan tahay in dareenka qof walba uu si otomaatig ah u soo jiito tuubbooyinka musqusha. Inta badan qasabadaha musqusha ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu yar ee qurxinta musqushaada. Haddana waxay saameyn weyn ku leeyihiin aragtida weynaanteeda. Xaqiiqdii, waxaad ku dari kartaa taabashada xarrago musqusha kasta oo leh musqusha qasabadda musqusha ee kaliya ee WOWOW. Nakhshadeeyayaasha WOWOW waxay si cad u fahmeen saameynta qasabadaha musqusha, sidaas darteedna waxay qorsheeyeen qasabadaha musqusha oo isbeddel ku sameyn kara qurxinta kasta.
Naqshadeynta tubbada tubbada musqusha keliya
Waxaad dooneysaa in qurxinta musqushaadu ay noqoto mid qurux badan isla markaana shaqeynaya waqti isku mid ah. Sidaas awgeed, waa inaad goaansato nooca tubada musqusha ee aad dooran doonto. Maaddaama ay jiraan dhowr nooc oo tubooyinka qubayska, marka hore waa inaad fiirisaa meesha bannaan ee aad haysato, iyo waxaad doorbideyso oo ku saabsan xakameynta heerkulka biyaha. Ma jeceshahay inaad ku xakameyso heerkulka biyaha iyo mugga 2 gacanta ama mid keliya? Markii aad doorbideyso hal gacan, ka dibna qolka musqusha ee kaliya ee WOWOW ayaa noqon kara tubada qaaliga ah ee aad raadineyso!
Qolka musqusha qolka musqusha ayaa waxaa laga sameeyay labadaba qaab muuqaal ah iyo mid shaqeynaya labadaba. Gacanta keliya ee goglan ayaa si raaxo leh ugu taal dhinaca tubbada qubayska. Qolka biyaha musqusha ee WOWOW wuxuu ku shaqeeyaa si habsami leh. Mugga mugga iyo heerkulka ayaa si habsami leh loogu xakamayn karaa hal gacan. Kaliya hal gacan ayaa shaki la’aan shaki la galiyay in la qabto lagana shaqeeyo. Waxaad si sahlan ugu shaqeyn kartaa gacanta ku haynta tubada musqusha gacmo keliya adoo iska jiidaya. Sidan ayaa socodka biyaha isku habeysan lagu shaqeynayaa. Adigoo wareejinaya gacanta keliya waxaad ku kordhin kartaa heerkulka biyaha si dhib yar oo qumman. Qaab-dhismeedka saddex-geesoodka ee Mareykanka-Mareykanka ee xaqiiqda qaaska ah waa mid gaar ah. Tani waxay ka dhigeysaa musqushaada xitaa mid aad u sarreysa, iyadoo ka faa'iideysaneysa dhammaan howlaha ay ku siiso.
Qolka dharka lagu qubeysto oo tayo sare leh oo keliya
WOWOW musqusha weelka kaliya ee gacanta lagu qaado wuxuu ka samaysan yahay naxaas aad u baaxad weyn iyadoo cadaynteeda nikkel-keeduna ay ahayd mid gacanta lagu nadiifiyey oo lagu nadiifiyey. Dhamaadkeeda, WOWOW waxay isticmaashaa tiknoolajiyad casri ah si ay u bixiso tayada ugu badan iyo adkeysiga. Sababtoo ah qasabadda musqusha ee gacanta keliya ee WOWOW waxay ka samaysan tahay naxaas adag, qasabaddan musqusha cusub waxay sidoo kale bixisaa caabbinta ugu wanaagsan ee qoyaanka iyo sidaas darteed daxalka. Maaha wax aan jirin, WOWOW waxay bixisaa mudo 3-sano ah oo dammaanad qaad ah musqusha qasabaddeeda oo keliya. Caddayn in WOWOW ay aaminsan tahay tayada wax soo saarkeeda ayna mas'uuliyad iska saareyso waxqabadkeeda sanadka oo dhan.
Maaddaama naqshadda tubbadda musqusha keliya ay gaar u leedahay oo la sharciyeyn karo, sidoo kale qaar ka mid ah shaqadeeda ayaa ah kuwo gaar ah. Qalabka badbaadinta biyaha waarta tusaale ahaan. Waxqabadka sare ee Aoperl Aerator ee musqusha qolka musqusha ayaa leh astaamo jilicsan oo xakamayn socodka socodka biyaha ah. Sidaa darteed ma arki doontid wax biyo daadanaya. Ka sokow waxay badbaadinaysaa 50% isticmaalka biyaha. Tani waxaad xaqiiqdii ku ogaan doontaa biilkaaga biyaha. Azerlarka si fudud ayaa looga saari karaa iyadoo lagu daro (lagu daro) azerlarget tool. Sidan ayaad si fudud u nadiifin kartaa hadda iyo ka dib, si loo dammaanad qaado khibradda ugu wanaagsan ee waxqabadka sanadaha.
Qubeyska fudeedka musqusha oo si dhib yar loo xafidi karo
Ugu horreyntii, dhammeystirta naxaasta ee loo yaqaan 'nickel' wuxuu siinayaa taabasho qurux badan musqusha kasta. Ka sokow, dhammeystirka tayada sare waxay sidoo kale ka hortagtaa dhibco-biyoodka, yaraanta iyo faraha. Sidaa darteed way fududahay in la ilaaliyo oo la nadiifiyo. Waxaad si tartiib ah ugu nadiifin kartaa wixii haraaga ah maro qoyan si aad qolkaaga musqusha mid keliya u ifiso sidii mar labaad. Si aad u nadiifiso tubada qolkaaga musqusha si joogto ah waxay sidoo kale dammaanad u tahay adkeysi cimri dheer. Sidan ayaa hadhaaga adag malaha isbadal kudhaca tubbada qubayskaaga. Gaar ahaan, hadhaaga sida nuuradda oo kale ah waxay saameyn kartaa tubada musqushaada, haddii aan si joogto ah loo nadiifin. WOWOW ayaa fududaynaysa, si aad taas u sameyso dadaal la'aan.
Qalabka dhoobada dhoobada ee musqusha hal gacan ayaa ku siinaya waxqabad 100% oo aan faleebo lahayn. Haddana iyadoon hoos loo dhigin habsami u shaqaynta. Kaydadka dhoobada tayada sare leh waxaa lagu tijaabiyay in ka badan 500,000 oo wareeg oo biyo ah. Oo weliba WOWOW musqusha qasabadda hal musqusha ayaa ku shaqeysa isla fudeyd isku mid ah. Dabcanna wali waa lacag-bixin iyo qashin la'aan. Qiyaas in qasabadda musqusha aan la isticmaali karin in ka badan 10,000 jeer sanadkii. Taas macnaheedu waa iyada oo qasabadda musqusha hal gacan oo ah WOWOW aad noloshaada ku iibsatay qasabad musqusha. Qasabaddan musqusha ee gacanta lagu wada qabtay oo keliya ayaa ka sarreysa dhammaan heerarka warshadaha!
Musqul qubayska musqusha iskiis ah
Qolka dharka lagu qubeysto ee musqusha ayaa ah wax fudud in naftaada la rakibo Uma baahnid tuubbo qaali ah! Sidaa darteed waxaad sidoo kale badbaadin kartaa qarashka rakibaadda si aad ah. Qubayska qubayska maydhashada waxa la siiyaa qalab dhammaystiran oo qalab iyo qalab rakib ah. Tan waxaa ku jira saxan bir ah oo bir ah, 20 jeedal tuubada biyaha Tucai ah oo leh tayo la hubo, galoofinta rakibaadda, aalad meesha ka saareysa, iyo inbadan.
Sida aan kor ku soo sheegnay, WOWOW aad ayey ugu kalsoon tahay tayada tubooyinka musqulaha ay leeyihiin. Sidaa darteed WOWOW waxay ku siinaysaa muddo 3 sano oo damaanad ah. Haddii tubada qolkaaga musqusha aysan u shaqeyn doonin sidii loo rabay, waxaa lagu siin doonaa gacmo furan musqul cusub oo cusub oo beddela kuwaaga. Ka sokow, WOWOW waxay bixisaa 90-maalmood oo lacag celin dammaanad ah. Hadeysan kugu soo jiidan doonin qiimaha lacagta WOWOW ay kuusoo bandhigeyso, waad sameyn doontaa
hel lacag celin buuxda oo aan kharash dheeraad ah lahayn, oo aan su'aalo la weydiinin. Fudud sidaas!
Faa'iidooyinka tubbada qubayska musqusha oo keliya marka la eego:
Design Naqshad saddex-geesood leh oo Mareykan ah
Nick Sinjila'aanta weligeed kacsan
 Laga sameeyay qalab tayo sare leh
Birta gacanta lagu qaboojin karo oo la dejin karo
Waxay ku keydisaa 50% biyo biyo-abuuraha hal abuurka leh
Warranty Muddo 3 sano ah oo damaanad qaad ah
SKU: 2321501 Categories: Qubeysashada Qolka Musqusha Oo Kaliya, Qubeyska Musqusha Tags: 1 Qabashada, 1 Hood, tubada qubeyska
Xaddiga Xidhmada Waxyaabaha